Ciidanka Xoogga Dalka oo xorreeyay degaanka Biya-cadde ee Sh/Dhexe
Ciidanka Xoogga Dalka oo taageero ka helaya kuwa Midowga Africa ayaa iyagoo aan wax iska caabin ah la kulmin gudaha u galay degaanka Biya-cadde ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Dadka degaanka ayaa xaqiijiyay in ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay si nabad ah ula wareegeen gacan ku heynta degaankaas iyagoo aan wax xabad ah ridin. Ciidanka ayaa dhawr jiho ka soo galay degaanka, taas oo jahwareer ku riday argagixisadii halkaa ku sugnaa, sababtayna in ay duurka u cararaan. Argagixisada fuleyda ah ayaa door biday in ay cagaha wax ka dayaan intii aan lagu durdurin.
Fuleydii way carareen, ayuu yiri oday dadka degaanka ka tirsan. Odayga ayaa intaa ku daray in argagixisadu ay ka argagaxday sawaxanka ciidanka soo socda. Degaanka Biya-cadde waxuu 40km dhanka waqooyi kaga beegan yahay magaalada Jowhar, 25km na waxuu u jiraa magaalada Mahadey ee isla gobolka Shabeellaha Dhexe. Xorreynta degaanka Biya-cadde ayaa ku soo beegmeysa xilli uu socdo shirka maamul-u-sameynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.
Degaanno muhiim ah ayaa Shabaabka laga xorreeyay sannadihii 2012 iyo 2013, balse argagixisadu waxay wali awoodaan in ay shacabka waxyeeleeyaan, waana in laga cirib tiraa dalkoo idil si loo badbaadiyo shacabka Soomaaliyeed ee nabadda jecel.
Horjooge ka tirsanaa al-Shabaab oo lagu dilay Ceel-qooxle, Galgaduud
Laba nin oo mid ah mid ah uu ahaa sarkaal ka tirsanaa Al-Shabaab oo dhibaato u geysan jiray bulshada ayaa lagu dilay deegaanka Ceelqooxle ee gobolka Galgaduud, siadaana waxaa sheegay sarkaal dowlada u qaabilsan degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud.
Sarkaal u hadlay ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ee ka howlgala Galgaduud ayaa sheegay in horjoogaha la dilay uu Shabaab u qaabilsanaa ururinta waxa ay ku sheegaan Sakada. Sarkaalka ayaa sheegay in horjoogahan iyo nin kale oo ka tirsana Shabaab lagu dilay howlgallo ay ciidamada XDS ka sameeyeen deegaanka Ceel Qooxle ee degmada Ceelbuur.
Sarkaalka ayaa xusay iney sii wadayaan howlagalada ay ku ugaarsanayaan haraadiga maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ku weli ku dhuumaaleysanaya deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud.
Wuxuu intaa raaciyay in ciidamada dowladda ay howlgalo ka wadaan meel 10 KM u jirta deegaanka Ceelqooxle isla markaana ay sii wadayaan howlagalada ay ku ugaarsanayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ku sugan weli qeybo ka mid ah gobolka Galgaduud.
Ciidamada Ammaanka Jubaland oo fashiliyay qarax miino
Ciidamada Nabad Sugidda Jubbaland ayaa fashiliyay qarax la geliyay meel udhow garoonka diyaaradaha Kismaayo, bartamaha wado sii aada xerada Ciidamada Booliska ay ku leeyihiin meel duleedka magaalada Kismaayo.
Masuulka uhadlay maamulka garoonka Kismaayo ayaa sheegay in miinada lagu aasay meel garoonka diyaaradaha Kismaayo ujirta 3km oo ku beegan wadada xaruunta ciidamada booliska isla markaana ciidamada Nabad Sugidda ay ka war heleen kadibna ay qarxiyeen. Masuulka ayaa intaa ku daray in kooxaha nabad diidka ah ay rabeen inay miinadaas shacabka ku wax yeelleeyaan, balse taasi ay ka hortageen ciidamada Jubbaland.
Dhanka kale, ciidamada Xoogga Dalka iyo kuwa AMISOM ayaa weeraray fariisimo ay argagixisadu ku lahaayeen deegaanada Buulo-Gaduud iyo Yoontooy ee gobolka Jubbada Hoose. Dagaalka ayaa ku billowday duqeyn ay sameeyeen ciidamada dowladda, waxaana xigay iska horimaad toos ah oo dhex maray labada dhinac, taas oo sababay in al-Shabaab degaannadaas laga sifeeyo.
Maamulka Jubbaland ayaa dhowaan sheegay inuu qaadi doono howlgallo ka dhan ah al-Shabaab, waxaana soconayay dhaq dhaqaaqyo ciidan oo ay wadeen ciidamo dowladda iyo kuwa AMISOM ee ku sugan degaannada Jubba.
Dhowr iyo labaatan eedeysane oo loo xiray qaraxii Daallo Airlines
In ka badan dhowr iyo labaatan qof ayaa loo xiray qaraxii dhowaan loo geystay diyaaradda Daallo Airlines. Dadka la xiray ayaa lagu xiriirinayaa in ay fududeeyeen qaraxii diyaaradda, iyadoo uu wali socda baaritaan dhowaan laga soo saari doono natiijo buuxda.
Hay’adda Nabad Sugidda Qaranka iyo Sirdoonka Soomaaliya ayaa baahisay muuqaal ay duubtay kaamiradda qarsoon ee garoonka diyaaradaha Aadan Cadde. Muuqaalkaas ayaa muujinayo laba nin xiran dharka shaqaalaha garoonka oo kumbiyuutar nooca laabtoobka u dhiibayo ninka lagu tuhmayo in uu ahaa qofkii ka dambeeyey qaraxa diyaaradda, kaasoo ahaa qofka kaliya ee ku geeriyooday qaraxa kadib markii uu diyaaradda ka soo dhacay.
Xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in baaritaan hordhac ah oo lagu sameeyey dhacdadii diyaaradda Daallo Airline qabsatay toddobaadkii hore ay muujineyso in waxa ka dhacay gudaha diyaaradda uu ahaa isku day argagixisnimo oo fashilmay.
Wasaaradda duulista hawada ayaa ku dhawaaqday in tallaabooyin dheeraad ah oo ammaanka lagu sugayo lagu soo kordhinaya garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho, taasoo shacabka loogu baaqay in ay gacan ka geystaan.